China Model No: Chinese Manufacture Automatic Control SPJ Series simbi shredder muchina fekitari uye vatengesi | Mubatanidzwa Pamusoro
Metal shredder muchina mushini unoshanda wakawanda, unoshanda zvakasiyana-siyana, kushandiswa kweyakamisikidzwa modular dhizaini, zvikamu zvinochinjana zvakanaka, banga rekubatsira kutora kufa forging yakanatswa kubva. Chinangwa chikuru chesimbi shredder muchina ndechekuveura uye kuburitsa simbi yakakura uye yakakura dhayamita dhiramu simbi zvinhu izvo zvisiri nyore kutakura, uye kuichekerera mune inodiwa pepa zvinhu kuti iwedzere kuunganidzwa kwayo kutakura uye kudzokorodza zvakare. Chitarisiko chakanaka, chimiro chakanaka, chakanyatsojeka uye chakabatana. Kuonekwa kwesimbi hombe shredder muchina haungonatsiridza huwandu hwekugadzira uye kupwanya kugona, asi zvakare inowedzera chiyero chekushandisa.
Metal shredder muchina unonyanya kushandiswa kupwanya zvimedu zvesimbi, kuwedzera kuwanda kwayo kuitira kufambisa kufambisa, kudzokorodza. Metal shredder muchina unoshandiswa zvakanyanya mukuchekeresa pendi bhaketi, dhiziri bhaketi, simbi yakatetepa simbi, mota shell, simbi inotsikirira block, sheet simbi zvimedu uye zvimwe zvakarasa simbi zvinhu. Metal shredder muchina blade inogadzirwa neakawanda simba alloy simbi, ine yakasimba kupfeka kuramba uye yakakwirira simba ...
●Banga gobvu rinofamba, kukwirira kwekupwanya, maturusi anogadzirwa nealloy simbi kukanda, yakasimba uye yakareba sevhisi hupenyu.
● Ukobvu hwepuratifomu, inogona kuramba yakakwirira torque, yakasimba kwazvo.
● Microcomputer (PLC) automatic control, set up start, stop, reverse and overload automatic reverse control function.
● Yedu yesimbi shredder muchina ine hunhu hwekumhanya kwakaderera, torque yakakura, yakaderera ruzha, guruva rinogona kusvika pachiyero chekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
● Zviri nyore kugadzirisa, mutengo wakaderera wekugadzirisa, hupfumi uye hunogara kwenguva refu.
● Ukobvu hwechishandiso uye nhamba yembavha dzebanga zvinogona kuchinjwa zvichienderana nezvinhu zvakasiyana
Kushanda musimboti wesimbi shredder muchina:
Zvishandiso kuburikidza nehurongwa hwekudyisa mumushini wekuchekeresa mukati mebhokisi, simbi shredder muchina bhokisi rine shredding blade, zvinhu mushure mekutsemura blade kubvaruka, extrusion, shear uye chimwe chiitiko chakazara, chakatsemurwa kuita zvidimbu zvidiki zvezvinhu kuzadzisa zvinodiwa, kubva pasi. chikamu chebhokisi. Kubuda kwesimbi shredder muchina hakungogadzirise nzvimbo yakakura yekuisa zvinhu kuburikidza nekugadzirisa simbi shredder muchina zvakare iri nyore kutakura uye kudzokorodza. Mukuita kwese, iyo inonyanya kukosha ndeye yekucheka musoro uye mota, simbi shredder muchina kubvarura simbi zvinhu, cutter musoro kuoma, kupfeka kuramba zvinodiwa zvakanyanya kukwirira, kana zvisiri kusvika kune zvinodiwa zvinotungamira mukukuvadzwa kwesimbi shredder muchina.
Yedu simbi shredder muchina ine otomatiki kudzora, iri nyore kushanda, nyore kugadzirisa.
1.Metal Shredder machine blade
Isu tinokwanisa kugadziridza simbi shredder muchina blade iwe nezve yakabikwa yeiyi simbi shredder muchina.
3. All-in-one muchina
Yedu diki yese-mune imwe simbi shredder muchina ine yakakosha dhizaini, inovhara nzvimbo diki, ine Chengetedzo uye Zviri nyore Zvimiro.
Model blade dhayamita (mm) Saizi yekamuri(mm) kugona (kg/h) Simba(kw) Saizi yemuchina(mm) Huremu(kg)
Yedu SPJ Series simbi shredder muchina inopa yakajairika yakakurumbira brand muchina zvikamu, tanga tichishandira pamwe nevazhinji vane mukurumbira pasi rose brand supplier, seSIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI uye zvichingodaro kweanopfuura makore gumi.
Tichashandisa akaputirwa firimu kurongedza kana mapuranga kurongedza kuchengetedza yedu SPJ Series simbi shredder muchina, isu tichaita kudzivirira kwakanaka kune yedu SPJ Series simbi shredder muchina tisati tatakura mudziyo.
Tarisa zvimedu zvesimbi shredder Machine muAction!
Zvakapfuura: Muenzaniso Kwete: CBJ Series hydraulic scrap bale breaker muchina
Zvinotevera: Muenzaniso Nha: Chinese Manufacture Manual Control Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
simbi shredder muchina
Homemade Cardboard Baler, Aluminium Foil Baler Machine, Pop-Pamusoro Inogona Baler Equipment, Y81 Hydraulic Baler, Zvimedu Metal Compactor, Leaf Compactor uye Baler,